Ụkpụrụ AMP maka ndị na -ede blọgụ - Mee Google AMP n'ọrụ, ọ dị mfe! - IG
Mee ka Google AMP rụọ ọrụ naanị otu mkpado meta ! - Jiri ndebiri Blogger AMP n'efu dị ebe a iji nye akwụkwọ AMP zuru oke Google maka ntinye akwụkwọ blog gị.
Kwalite blọgụ blọgụ gị maka ngwaọrụ mkpanaka na ndị ọrụ ha , si otu a na -akwalitekwa posts gị maka ụzọ mkpado ekwentị mbụ .
Nwalee ya ugbu a: tinye meta mkpado ma ịmechaa!
Wụnye / tinye n'ọrụ Blogger AMP template
Ntuziaka nzọụkwụ na- esonụ na - egosi gị otu esi etinye ma rụọ ọrụ ndebiri AMP na blogger blog gị . Mgbe ịtinye, ihe ọ bụla ọzọ na-agba na-akpaghị aka na ndabere - biko mara na nyocha ọchụchọ ahụ ga-ebu ụzọ chọpụta ma hazie akara AMPHflix na ibe nke blog gị tupu AMP nsụgharị na-apụta n'ezie na nsonaazụ ọchụchọ!
Banye na blog
Banye na akaụntụ Blogger gị wee banye na Blogger Dashboard.
Fanye koodu AMP wijetị
Site Blogger dashboard, ịnyagharịa na nhọrọ ndị a:
Template -> Dezie HTML
Na koodu HTML, gbakwunye mkpado meta na-eso ebe na mpaghara <isi> :
Chekwa ma emechaa!
Chekwaa mgbanwe. Ejiri AMP template ma rụọ ọrụ na blog!
Gịnị kpatara ndebiri AMP a?
Nke a na ọrụ AMP wijetị / ndebiri maka ndị na-ede blọgụ, site na amp-cloud.de, na-arụ ọrụ Accelerated Mobile Peeji (AMP) na blọọgụ gị - yabụ mepụta faịlụ AMP kwekọrọ na Google na-enweghị ihe ọmụma AMPHflix ọzọ, na-enweghị oge agbakwunyere, na-enweghị ego. Dị nke posts blogger gị, jiri naanị otu HTML meta mkpado!